अनेक स्वास्थ्य समस्यादेखि सौन्दर्यका लागि अति नै उत्तम तानोपानी, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अनेक स्वास्थ्य समस्यादेखि सौन्दर्यका लागि अति नै उत्तम तानोपानी
एजेन्सी । पानी स्वास्थ्यकालागि निकै उपयोगी पदार्थ हो। मनतातो पानी स्वास्थ्यकालागि निकै फाइदाजनक हुने डाक्टरहरूले बताएका छन्। तातो पानी स्वास्थ्य मात्रै होइन आफ्नो सौन्दर्यलाई निकै फाइदाजनक हुन्छ। यसले हाम्रो शरीरलाई औषधिकोसमेत काम गर्छ।
- दिनहुँ बिहानमा पानीलाई थोरै तातो प्रयोग गर्नाले कब्जियतको समस्यालाई समेत दूर गर्न मद्दत गर्छ।
- यदि तपाइँमा माेटाेपना छ भने तातोपानी सधैँ खाएमा मोटोपनबाट छुटकारा दिनको निकै सहयोग गर्छ।
- तातोपानी स्वास्थ्यका लागि निकै आवश्यकता पर्छ र तातो पानीले शरीरलाई निकै फाइदा पुग्छ।
- तोतोपानीमा स्नान गर्नाले थकाई मेटाई शरीरलाई आराम प्रदान गर्छ।
- तातोपानीले छाला सम्बन्धी रोगहरुका लागि निकै फाइदा गर्छ।
- सबैलाई थाहा छ तातोपानीले सौन्दर्य र स्वास्थ्य दुवैलाई फाइदा गर्छ। त्यसैमा गुलाब पानी मिसाएर विस्तारै आफ्नो शरीरमा लगायौं भने हाम्रो शरीरमा भएको दुखाईलाई समेत अन्त्य गरिदिन्छ।
- सधै मनतातोपानी सेवन गरेमा सधै फ्रेस देखिनुहुनेछ।
-तातोपानी पिउनाले रक्त सञ्चार ठिक तरिकाले गराउने काम समेत गर्छ।
-मनतातोपानीको साथै कागती र मह मिसाएर पिउनुभयो भने तपाईंको रोग प्रतिरोधक क्षमता निकै बढ्ने गर्छ।
-चिसो पानीलाई मृगौलाको लागि निकै हानिकारक मानिन्छ, मृगौलालाई राम्रो बनाउनको लागि हरेक दिन विहान र बेलुका एकएक पटक मनतातोपानी पिउनु उचित हुन्छ । यसले शरीरमा हुने दुर्गन्धलाई पनि हटाइदिन्छ।
-मनतातो पानी हाड जोर्नीको दुखाई कम गर्न उपयुक्त हुन्छ। मनतातो पानी जोर्नीहरुबीचको घर्षण कम गर्न सहयोगी मानिन्छ। भविष्यमा हुने जोर्नी सम्बन्धी रोगलाई कम गर्ने जनाइएको छ। चिसो पानी भन्दा निकै गुण बढी फाइदा जनक तातोपानी हुने गरेको छ।
-स्वास तथा मृगौला सम्बन्धी रोगभएको व्यक्तिले चसो पानी पिउनु फाइदा जनक हुँदैन। त्यसैले तातोपानी निकै फाइदाजनक मानिन्छ। चिसो मौसममा चिसो पानी पिउनु हुँदैन। मन तातो पानी पिउनुहोस् भविष्यमा हुने रोगबाट बाँच्नुहोस् ।